The Man Who Killed Hitler and Then The Bigfoot (2018) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Not Rated 2018 98 min Adventure, Drama, Science Fiction
အထီးကျန်နေတဲ့ လူအိုကြီးတစ်ယောက် သူမှာ ဓာတ်ပုံလေး တစ်ပုံရယ် သူချစ်ရတဲ့ ခွေးလေး တစ်ကောင်ရယ် အိမ်တစ်လုံးရယ်က လွဲပြီး ဘာမှမရှိခဲ့ပါဘူး…
တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက်စစ်ပွဲမှာ ငါကြိုးစားခဲ့ရပင်မဲ့ ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားတစ်ခွန်းကိုတောင်သူမကို ငါမပြောနိုင်ခဲ့ဘူး… အေးအေးချမ်းချမ်း နေချင်တယ် ငါးမြှားမယ်
သူမကို လွမ်းရင်းနဲ့တစ်သက်လုံးနေမယ် ဒါပေမဲ့ တိုင်းပြည်က ငါ့ကိုထပ်ပြီး လိုအပ်လာချိန်မှာ ငါမျက်နှာလွဲပြီး မနေနိုင်ခဲ့ဘူး ….. ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားကို ထပ်ခါထပ်ခါ ပြောခဲ့ပါတယ် ..
Calvin ပြန်စာမရနိုင်တဲ့ စာတွေကိုလဲ မရေတွက်နိုင်အောင် ရေးခဲ့တယ် … ရှင့်အိမ်ရှေ့ကို ရောက်တိုင်းလဲ အိမ်ရှေ့တံခါးဝမှာ စာပို့သမား ပို့ထားတဲ့ ကျွန်မရဲ့စာလေးကို မြင်နေရုံမှ အပ ကျွန်မအတွက် မျှော်လင့်စရာ မရှိပါဘူး…
ဒါကို အပြစ်ဆိုရရင် သတ္တိမရှိခဲ့တဲ့ ရှင်လား အဲ့နေ့ညကသာ ကျွန်မ ရှင့်ကို လှည့်ကြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်မတို့ ဘဝက ခုလိုမျဉ်းပြိုင်ဖြစ်နေဦးမှာလား …. အမေရိကန် Drama/Thriller Movie လေးဖြစ်ပါတယ်. Credit Review
Option3cloud.msubmovie.com 532 MB SD (480p)